जन्मदिने आमालाई काठमाडौको तीनकुनेको झाडीमा फा’ल्ने छोरा को होलान् ? पा’पी छोराको खोजीका लागि तस्बिर शेयर गरिदिनु – Gandaki Chhadke
जन्मदिने आमालाई काठमाडौको तीनकुनेको झाडीमा फा’ल्ने छोरा को होलान् ? पा’पी छोराको खोजीका लागि तस्बिर शेयर गरिदिनु
By गण्डकी छड्के Last updated Dec 17, 2020
काठमाडौ । एउटी आमालाई यस्तो अवस्थामा काठमाडौको तीन कुनेमा अ’लपत्र अवस्थामा फालेर हिड्ने सन्तानको खोजीका लागि यो तस्बिर मानवसेवा आश्रमले सार्वजनिक गरेको हो । अन्तिम अवस्थामा रहेकी एक महिलालाई तीन कुनेवाट उ’द्दार गरिएको भएपनि उनको मृ’त्यु भएको छ ।विरामी अवस्थामा महिलालाई फेला पारिएको भन्दै मुना मानव सेवाले उनको उ’द्दार गरेको थियो । तर उनको मृ’त्यु भएको जनाएको छ । मुना मानवसेवा नामको फेसवुक मार्फत यि महिलाको छोराछोरीलाई चिन्नेहरुका बारेमा खबर गरिदिनु भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ ।
फेसवुकमा लेखिएको छ, यस्तो छ हाम्रो समाज ( जन्मदिने आमालाई यसरी फ्या’लिदिने महा मानव ति छोराको अनुहार हेर्न मन छ ।? मेरो मृ’त्युबाट तिमि खुशी हुन्छौ भने तिम्रो लागि हाँसीहाँसी मृ’त्यु वरण गर्न तयार छु छोरा ! तिम्रै सफल र असल जीवनकै लागि त नौ नौ महिना सम्म कत्ति पनि अ’फ्ठेरो नमानी पेटमा बोकेर हिँडे, प्र’सव पी डा सहेर यो धर्ति देखाएँ अनि तिमीलाई समाजमा ला’यक बनाएँ ।तिम्रो लागि म लायक बन्न सकिन होला छोरा त्यसैले त चिन्दै नचिनेका मानिसको काखमा अन्तिम श्वा’स फे’र्ने अवस्था आयो १ सायद तिम्रो काखमा जीवनका अ’न्तिम पलहरु बिताउन मैले भाग्यमा ल्याएको थिईन होला छोरा ! सधै खुशी रहनु छोरा ! मेरो शुभ आशिर्वाद !!
(काठमाण्डौ तिनकुनेको झा’डीबाट हिजो राति उद्धार गरिएकी आमालाई ब’चाउन सकिएन) यस्ती आमालाई झाडीमा ल्याएर फ्या’ल्ने उनको परिवारलाई खोज्न यो पोष्ट सक्दो सेयर गरिदिनुहुन अनुरोध छ । यो हद सम्मको कु गर्नेलाई सामाजिक ब’हिस्कार गरौं ।आमाको घरपरिवारलाई कसैले चिन्नुहुन्छ भने ९८५५०७६००४ मा सम्पर्क गरी जानकारी गराउनहुन सादर अनुरोध छ ।अ’परा’धको पराकाष्ट, अमानवीयताको सीमा नै पार गरी यी आमालाई झाडीमा फ्या’लिएछ । उ’द्धार गरी अस्पताल लादा लादै आमाको मृ’त्यु भयो । आमालाई बचाउन त सकिएन तर आमालाई झाडीमा ल्याएर छा’ड्ने महामानवलाई देख्ने ईच्छा भयो । आमाको स्वार्गमा बाँस होस् ,स्वार्गिय आ’त्माप्रती भा’वपुर्ण श्र’द्धाञ्जली ।